Ukuqomisa – iAfrika
Ukushela nokuqomisa lokhu yinto eyimpilo futhi nje okungumdlalo omnandi uma usakhula uyibhungu. Uhleli uzwa izinsizwa zincokola ngokuthi ziyoqomisa okusha ukuthi ziyoshela. Ukushela lokhu phela akugcini emakhaya, ngisho nasesilungwini kanye nakhona emalokishini ngoba phela indlela yokuphila. Iqoma leli igama lobhasikidi wesiZulu oyikhethelo obeka noma ophatha izinto eziyigugu kumuntu osuke ephisana ngesipho nakulowo osuke esemukela, sasifakwa kulobhas’kidi ke okuthiwa iqoma oyikhethelo ngoba kusuke kuyizinto zekhethelo.
Isibonelo nje ukuthi intombi yayithi uma isiqoma insizwa, iyakhela ucu. Ucu ke lona lwakhiwa ngobuhlalu kanti futhi luyagaxwa. Yiloke ucu lolo okwakuthi uma intombi isithande insizwa ebese yenza izizipho ebese inika insizwa esithe iyiqoma, lasuka laphoke negama ukuqoma lisuselwa kulo leligama leqoma okusho ukuthi lentombi kukhona la esithanda khona noma esiqome khona, lokho okusho ukuthi isilikhiphile iqoma elinalezizipho phakathi yikho futhi uma ngokwesiZulu uma uthanda umuntu noma umkhonze kakhulu kuyaye kuthiwe “umthwele noma ngimthwele ngeqoma” lowomuntu-ke usuke engaconsi phansi usuke ethandwa ngempela.
Ukuqoma ke kwehlukene nakho, kukhona lokhu kokumisa iduku ekhaya esingathi ukuqoma kwesintu bese kuba khona lokhu kokujola nakho kuyikho ukuqoma ngoba phela naso isisekelo sakho sakhiwe phezu kothando. Kodwa nje eThekwini alimiswa iduku phandle kwezindawo ezisemakhaya njengako Mbumbulu nakhona ukwenza akusafani ngoba phela lena yeduku seyayekwa futhi abantu sebashintsha nokwenza sekwaba khona nendaba yokucela umshado ngesilungu, phecelezi i- “engagement” lapho khona okuthi uma umuntu evuma ngesintu usuke esebizwa ngengoduso kanti ngokwesilungu ubizwa nge “fiancé” kuze kufika ekutheni bayashadana ngokuphelele.
Tags Ukuqoma, Ukuqomisa